Interesting « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
मन्त्रीपरिषद बैठक बस्दै, लकडाउन गर्ने नगर्ने बारे छलफल हुने
काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो दिन काठमाडौँ उपत्यका सहित देशैभर कोरोना संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । उपत्यकासहित देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या थपिएनेक्रम तथा मृतकको संख्या
नेपालमा कोरोनाका कारण थप एक जनाको गयो ज्यान
मोरङ -विराटनगरमा कोरोनाका कारण एक पुरुषको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा विराटनगर(५ का ७७ वर्षीय पुरुष रहेका छन् । उनको उपचारका क्रममा कोसी अस्पतालमा
नेपालमा आज थप ३५८ जनाले कोरोनालाई जितेर
काठमाडौँमा फेरी लकडाउन हुन के गर्ला ?
नेपालमा पहिलो पटक कोरोना संक्रमितको प्लाज्मा थेरापी
काठमाडौँ उपत्यकामा थप ३१ जनामा कोरोना संक्रमणको
नेपालमा १४ हजार ६०३ जनाले कोरोनालाई जितेर
र्‍याप गीत ‘बाउन्स ब्याक’ सार्वजनिक (भिडियोसहित)
सुशांत सिंह राजपुतको बहिनी रानी सिंहले लेखिन् रक्षाबन्धनको दिन यस्तो भावुक पत्र
श्रीलंकाले दाबी गर्दै भन्यो ‘लंकाका राजा रावणले विश्वमा पहिलो जहाज उडाएका हुन्, राइट दाजुभाइले होइन’
एजेन्सी । दश शिर भएका भनिएका रावण रामायणको एक पात्र हुन । सृष्टिकर्ता ब्रम्हाका पनाति,
एजेन्सी । दश शिर भएका भनिएका रावण रामायणको एक पात्र हुन । सृष्टिकर्ता ब्रम्हाका पनाति, पुलस्त्यका नाति र विस्रवाऋषिका छोरा रावण शिवका परम भक्त तथा नारायणका कट्टर विरोधी रावण रामायणमा खलपात्रको रुपमा रहेको भएतापनि उनको श्रीलंकामा निकै श्रद्धा गर्ने गरिन्छ ।
दस मनुष्यको जति बुद्धि र दसजना मान्छेको जति बल भएका भनिएका रावणले नारीको अपमान गरेकाले पतन भएको भन्ने विश्वास छ । लंका भन्ने देशका राजा रावण फेरी एक पटक चर्चामा छन् । उनलाई चर्चामा ल्याउने काम श्रीलंकाले गरेको हो ।
श्रीलंकाले विश्वमा सबैभन्दा पहिले विमान उडाएका राइट दाजुभाईको रेकर्डलाई चुनौती दिँदै विश्वमा सबैभन्दा पहिले विमान उडाउने व्यक्ति रावण भएको दाबी पेस गरेको छ । श्रीलंका सरकारले आजभन्दा ५ हजार वर्ष पहिले रावणले पहिलोपटक विमान उडाएको दाबी गर्दै त्यसलाई प्रमाणित गर्न लागिपरिरहेको जनाएको छ ।
श्रीलंकाले आफुहरुसँग धेरै तथ्यहरु रहेकाले पाँच वर्षभित्र दुनियाँको पहिलो जहाज रावणले उडाएको प्रमाणित पनि गरेर देखाउने जनाएको छ । श्रीलंका सरकारले आजभन्दा ५ हजार वर्ष पहिले रावणले पहिलोपटक विमान उडाएको भन्दै एक विज्ञापन नै प्रकाशित गरेर रावणसँग सम्बन्धित दस्तावेजहरु शेयर गर्न आफ्नो देशका नागरिकलाई अपिल समेत गरेको छ ।
इतिहासमै पहिलोपटक मंगल ग्रहमा हेलिकप्टर पठाइदै, यि असम्भव कामलाई बनाउँनेछ सम्भव !
एजेन्सी । मंगल ग्रहमा हेलिकप्टर पठाउन सम्भव छकी छैन रु संसारका शक्ती सम्पन्न राष्ट्रले अनेकन
एजेन्सी । मंगल ग्रहमा हेलिकप्टर पठाउन सम्भव छकी छैन रु संसारका शक्ती सम्पन्न राष्ट्रले अनेकन कोशिस जारी राखेका बेला इतिहासमै पहिलोपटक मंगल ग्रहमा हेलिकप्टर पठाइदैछ । यो कामलाई नासाले सम्भव हुने दाबी गरिरहेको छ ।
पृथ्वीपछि जीवनको सम्भावना रहेको ठानिएको सौर्यमण्डलको अर्को ग्रह मंगलमा वैज्ञानिकहरु रकेटको माध्यमबाट त्यहाँ गएर अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएकोमा पहिलो पटक नासाले आफ्नो नयाँ मंगल मिसन अन्र्तगत अध्ययन र अनुसन्धानका लागि मार्स रोबरका साथ एक ड्रोन हेलिकप्टर समेत मंगल ग्रहमा पठाउन लागेको बिबिसीले जनाएको छ ।
बिबिसीका अनुसार मंगलको ग्रहको सतहमा गुडेर विभिन्न नमूना संकलन तथा अन्य तथ्यहरु संकलन गर्ने नासाको तयारी छ ।
नासका अनुसार मंगलमा पठाउन लागीएको मार्स रोबरको तौल १ हजार किलो तथा ड्रोन हेलिकप्टरको तौल जम्मा २ किलो रहेको छ । २३ वटा क्यामरा जडान गरिएको रोबरले १० वर्षसम्म मंगल ग्रहमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने बताइएको छ ।
विश्वचर्चित नेपालका यि दुई मेमोरी किङ, अर्पण शर्मापछि एकाएक उदाय बिजय
काठमाडौँ । पछिल्लो समय मेमोरी किङ भनेर चिनिएका विजयी शाही मिडियामा भाइरल बनेपछि धेरैले नेपालका
काठमाडौँ । पछिल्लो समय मेमोरी किङ भनेर चिनिएका विजयी शाही मिडियामा भाइरल बनेपछि धेरैले नेपालका अर्का विश्व किर्तीमानी युवा अर्पण शर्मासँग तुलना गरेका छन्।
कतिले स्मरणशक्तिमा समेत अनेकौं फरक प्रतिस्पर्धा हुने भएको हुँदा शाहीले पाएको कीर्तिमान र अर्पण शर्माले पाएको कीर्तिमान फरक हुन सक्ने पनि बताउँदै आएका छन्। विश्वकै सबैभन्दा तेज स्मरणशक्ति भएका शर्मा झापाका हुन् ।
उनको नाम गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्ड्समा लेखिएको छ। एक मिनेटभित्र ४२ वस्तुहरुको नाम क्रमवद्ध रुपमा सम्झेर उनले २०७१ सालमा विश्व कीर्तिमान बनाएका हुन्। नेपालीहरु बलमा मात्र होइन, बुद्धिमा पनि अब्बल छन् भन्ने उदाहरण आफूले प्रस्तुत गरेको उनीले एक अन्तवार्तामा बताएका छन्।
अर्पणकै शब्दमा उनले यो स्मरणशक्ति जन्मजात पाएका होइनन् । योगध्यानको बलले आफ्नो दिमागलाई तिखारेका हुन् । एसएलसी पास भएपछि अर्पणले आफूलाई तिखारेको बताउँछन्। एसएलसीपछिका दुई वर्ष उनले पूरै दुनियाँ भुलेर आफूलाई योग(ध्यानमा लिन गराए ।
थप जानकारीका लागि भिडियो हेर्नुहोस्
रमेश लामा ,काठमाडौ ,३०जुलाई ।
स्पेन बार्सिलोनामा रहेको हाम्रो नेपाल हामीनेपाली सामाजीक संस्था द्वारा राईटनेपालका सम्पादक भोला लामिछाने काबिरूद्द एन आर एन ए स्पेनले बिना छलफलबिना सुचना कसरी सामुहिक बहिस्कारभनेरनिर्णय गर्यो हाम्रो संस्था यसको लागीघोर आपत्ती सहीत एन आर एन ए स्पेनखारेजीको जोडदार मागगर्दछ । नेपालकास्की घर भई बार्सिलोनामा लुटिएकापिडित युवक ( पुरा विवरण गोप्यराखीएको छ ) लाई संचारकर्मी भोलालामिछानेले पार्कमा रात काटेको भेटेपछीहाम्रो नेपाल हामी नेपाली सामाजीकसंस्थाएवं क्षेत्री समाज स्पेन लगायत पिडितयुवकका चिनजानका ब्याक्तीहरू सहितलेउद्दार र सहयोगगरी खाना र बास दिएरपोर्चुगल सम्मको टिकटको ब्यवस्था गरीसहयोग गरेको र पिडीत यूवकलाईकास्कीसमाज स्पेनका अध्यक्ष बल बहादुर कार्की र एन आर एन ए स्पेनका कोषाध्यक्षगोबिन्दतिमील्सीना ले सुईको पाएर पनीवास्ता नगरेको युवक पार्कमै रात बिताएकोभन्ने स प्रमाण सहीत समाचारसंप्रेषण गरेकैभरमा कास्की समाज स्पेनले कुनै छलफलनगरी एन आर एन ए स्पेनलाई पत्रकाटीपत्रकारलाई कारबाही गर्ने भनेपछी एनआर एन ए स्पेनले एन आर एन ए स्पेनकापदाधिकारीहरू सगैस्पेनमा रहेका करिब ५०संघ संस्थाहरू लाई बिना जानाकारी बिनाछलफल कसरी निर्णय सार्वजनिक गर्योखेदछ । पुण्य कार्य लाई सम्मान गर्नु पर्नेसंघले उल्टै पत्रकारमाथी बहिस्कार गरेरठुलो गल्ती गर्यो ।एनआर एन ए स्पेनकोबैठकमा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीसामाजीक संस्था लाई जानाकारी नै नदिईसंस्था कोकृते हस्ताक्षर गर्न कसलेअधीकार दियो हाम्रो प्रश्न छ। बिधानबिपरीत भएका कार्यहरूको खुलेरबिरोधगर्दै एन आर एन ए स्पेनको औचित्यसकिएको ठहर गर्दै खारेजीको माग गर्दछौ।
एन आर एन ए स्पेनले स्पेनमा रहेका सबैसंस्थाहरू लाई बिना जानाकारी पत्रकारएवं समाजसेवी भोलालामिछाने लाई कसरीसामुहिक बहिस्कार गर्न सक्यो ? संघकोबैठकमा छलफलमै नबोलाईकनकसरीनिर्णय गर्यो ? बैठकमा उपस्थितकेही संस्था हरू मध्ये नेपाली जन सम्पर्कसमिती स्पेनका अध्यक्ष लेसमितीमाछलफल नै नगरी निर्णयमा हस्ताक्षर गरेकोस्वयम महासचीवले बताएका छन् भनेबाकी स्पेनमाछरिएर रहेका थुप्रै संघसंस्थाहरू लाई त जानाकारी नै छैन हाम्रोनेपाल हामी नेपाली सामाजीकसंस्थाबार्सिलोना , क्षेत्री समाज स्पेन , चितवन समाज स्पेन, स्याड्जा सहयोगसमाज स्पेन , नेवारी पासा पुचस्पेन , पुर्वेलीएकता समाज स्पेन, बेनिड्रम नेपाली समाज, नेपाली समाज पाईस भास्को , नेवा पासापुचम्याड्डीड , बाग्लुडं समाज स्पेन , गल्कोटसमाज स्पेन , तामाडं समाज स्पेनलगायतका थुप्रै संघ संस्थाहरूकती लाई तपत्र नै काटेको छैन । कतीले संस्थामा दुवैपक्ष लाई उपस्थीती गराएर छलफल नैनगरी र हाम्रोसंस्थालाई बिना जानाकारीबहिस्कार हुन सक्दैन बताएका पनी थिए ।क्षेत्री समाज स्पेनका महासचिवलेबैठकमैनोट अफ डिसेन्ट गरिसकेका छन् । एन आरएन ए स्पेनका सल्लाहकारहरू , दुई जनाआई सी सीसदस्यहरू बैठकमै उपस्थीतथिएनन् , उपाध्यक्ष दिनेश गिरीले दुवै पक्षको छलफल बिना निर्णय नहुनेबताएकाथिए ,थुप्रै कार्यसमितीका पदाधिकारूहरूसदस्यहरू ले संघ को मनोमानी पुर्ण रभेदभाव पुर्णकार्यको खुलेर बिरोध समेतगरेका छन् । यसरी एन आर एन ए स्पेन लेबिधान बिपरीत गलत निर्णय गरेकोछर्लडंगछ । यसको लागी एन आर एन ए स्पेनखारेजी हुनुपर्छ हाम्रो अन्तीम माग यही हो ।
संघको बिधान बिपरीत रहेर हाम्रो नेपालहामी नेपाली सामाजिक संस्था ले गरेकासामाजीक कार्यहरूकोबिरोध गर्दै एन आरएन ए स्पेनले पटक पटक बिधानबिपरीतका कामहरू गर्दै आएको सम्पुर्णस्पेनमारहेका संघ संस्थाहरूलाई अवगत नैछ । एक सामाजीक संस्थाले अर्कोसंस्थाले गरेको कामलाई कसरीबिरोध गर्नसक्छ भनी स्वय एन आर एन केन्दीयअध्यक्ष कुमार पन्त ज्यू ले बताई सक्नुभएको छ ।
। यसरी १,२ संस्थालाई बोकेर एन आर एनए स्पेनले स्पेनमा रहेका पचासौ संघसंस्थाको कृते हस्ताक्षरगर्दै बिना छलफलनिर्णय भएको प्रती हाम्रो संस्था घोर बिरोधगर्दै यस्ता संस्था नचाहीने भनीखारेजीकोमाग गर्दछ ।
सन्त बहादुर क्षेत्री
हाम्रो नेपाल हामी नेपाली बार्सिलोना ।
एक गुच्छा अंगुरको मूल्य नै लाख !
एजेन्सी । सामान्यतया अंगूरको मूल्य सुन्दा अचम्म मान्नुपर्ने अवस्था हुँदैन। तर जापानमा पाइने एक गुच्छा
एजेन्सी । सामान्यतया अंगूरको मूल्य सुन्दा अचम्म मान्नुपर्ने अवस्था हुँदैन। तर जापानमा पाइने एक गुच्छा अंगूरको मूल्य सुन्दा अचम्म लाग्छ नै। यसको मूल्य ८ हजार २ सय अमेरिकन डलर अर्थात् ८ लाख २० हजार रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ। अंगूरको एकदानाको नै ३१५ अमेरिकन डलर आर्थात् ३१ हजार ५ सय पर्छ।
यसले सबैभन्दा महंगो अंगूर भनेर रेकर्ड नै राखेको छ। रेकर्ड राख्ने २६ वटा दाना भएको यो अंगूरको गुच्छाको नाम ‘रुबी रोमन’ हो। यो सालको पहिलो लिलामीमा अहिलेसम्मकै महंगो मूल्यमा विक्री गरिएर यसले आफ्नो पुरानो रेकर्ड तोडेको हो।
लोकल वोर्ड अफ एग्रीकल्चरका अनुसार हरेक अंगूरको दानाको तौल कम्तीमा पनि २० ग्राम रहेको छ। महंगा फलफुलका लागि जापान प्रख्यात मानिन्छ। जापानमा मानिसहरु यस्ता महंगा फलफुलहरु उपहारमा दिइन्छ।
यि चर्चित समाचारवाचिकाको समाचार पढ्दा पढ्दै दाँत खुस्कियो, भिडियो भाइरल
काठमाडौं, साउन ११ । समाचार पढीरहेका बेला हाच्चिउ आए के गर्ने ? यो कुरा सोचिरहँदा
काठमाडौं, साउन ११ । समाचार पढीरहेका बेला हाच्चिउ आए के गर्ने ? यो कुरा सोचिरहँदा युक्रेनको टीभी च्यानल टीएसएनकी एक पत्रकारको समाचार वाचन गरिरहेकै समयमा दाँत खुस्किएको छ ।
युक्रेनको टीभी च्यानल टीएसएनकी पत्रकार मारिचा पदाल्कोले कोरोनाभाइरसको लाइभ रिपोर्टिङ गर्दागर्दै दाँत खुस्किएको भिडियो अहिले संसारभर भाइरल बनिरहेको छ ।
प्रसारणकै क्रममा दाँत खुस्किए पनि पदाल्कोले दर्शकले थाहा नपाउने तरिकाले सुटुक्क दाँत हातमा चिलिएर निकै चलाखीपूर्ण ब्यबहारका साथ उक्त दाँतदाई हातमा लिन समेत सफल भएकी छिन् । हेर्नुहोस् यो भाइरल भिडियो
प्रेमीले विबाह गर्न इन्कार गरेपछि प्रेमीकाले प्रेमीको घरबाहिरै सुरु गरिन् धर्ना, प्रेमीको परिवार घर भित्र थुनियो
काठमाडौं, साउन ११ । भनिन्छ माया र प्रेममा ठूलो शक्ती हुन्छ । प्रेमका लागि मानिसले
काठमाडौं, साउन ११ । भनिन्छ माया र प्रेममा ठूलो शक्ती हुन्छ । प्रेमका लागि मानिसले जे पनि गर्न तयार हुन्छ । जसको पछिल्लो उदाहरण भारतको डेनिसमन्डाको रसिला नगरमा देखिएको छ । ति प्रेमीकाले आँफु ५ वर्षदेखि प्रेममा रहेका प्रेमीसाग विबाह गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै ३ दिनदेखि धर्नामा बसेकी छन् ।
तर युवकका परिवारले त्यसबारे जानकारी नभएको बताउँदै पन्छिन खोजेको बताइएको छ । आफुले बिहेको बारेमा कुरा गर्न खोज्दा बिहे गर्न नमान्ने गरेकाले प्रहरीमा समेत उजुरी दिएर ति प्रेमीकाले कानुनी उपचारको बाटो समेत रोज्न पुगेको बताइएको छ ।
यद्यपी प्रहरीले भने आँफुलाई असहयोग गरेको समेत उनले आरोप लगाएकी छिन् । जसक कारण आँफुले धर्नाको सहारा लिनुपरेको ति पिडित महिलाको भनाई छ । आफु यसअघि समेत प्रेमिको घरमा आएको र त्यतिबेला युवकको परिवारले आफुलाई कुटपिट गरेको भन्दै उनले न्याय दिलाईदिन अधिकारकर्मीहरुलाई समेत गुहारेको बताइएको छ । युवतीले घरको गेटमा धर्ना थालेकाले उनका प्रेमीको परिवार घर भित्र नै थुनीन पुगेको छ ।
अनौठो दुर्लभ पहेंलो कछुवा भेटियो, तस्विर भाइरल
काठमाडौ, साउन ११ । तपाइले कहिल्यै पहेलो रगंको कछुवा देख्नु भएको छ । हामीले हाम्रो
काठमाडौ, साउन ११ । तपाइले कहिल्यै पहेलो रगंको कछुवा देख्नु भएको छ । हामीले हाम्रो चिडियाघरमा देखेको कछुवा खैरौ रंगको हो । तर यतिबेला एउटा पँहेलो रंगको कछुवा चर्चामा छ ।
भारतको उडिसा राज्यमा पहेंलो रंगको दुर्लभ कछुवा फेला परेपछि अहिले उक्त कछुवालाई हेर्नेको लाम नै लागेको समाचारमा जनाइएको छ । । किसान बाशुदेव महापात्राले आइतबार फेला पारेको यो कछुवा भारतको उडिसा राज्यको वन कर्यालयलाई बुझाएका छन् ।
यो दुर्लभ पहेंलो कछुवा फेला परेसँगै कछुवा विज्ञहरुले इन्डियन फ्लापसेल कछुवा दक्षिण एसियाका धेरै स्थनमा पाइने र यिनीहरु दर्लभ भएका कारण संरक्षणको आवश्यकता परेको औँल्याएका छन् ।
पृथ्वी नजिकैबाट आज खतरनाक क्षुद्रग्रहले यात्रा गर्ने, नासाले दियो डरलाग्दो चेतावनी
एजेन्सी । आज एउटा ठूलो एस्टेरोयड ९क्षुद्रग्रह० पृथ्वी नजिकैबाट यात्रा गर्दैछ । जुन कुराको अमेरिकी
न्युर्योक-अमेरिकाको म्यासाच्युसेटमा १ सय ३ बर्षकी बृद्धाले कोरोना जितेपछि अस्पतालको बेडमै बियर पार्टी दिएकी छन्
न्युर्योक-अमेरिकाको म्यासाच्युसेटमा १ सय ३ बर्षकी बृद्धाले कोरोना जितेपछि अस्पतालको बेडमै बियर पार्टी दिएकी छन् ।लामो समय अस्पतालमा भर्ना गरिएकी ती बृद्धाले कोरोनालाई जितेपछि खुशीयाली मनाउन बियर पार्टी दिएको समाचारमा जनाइएको छ । आफुमा कोरोना संक्रमण नभएको भन्ने चिकित्सकको कुरा सुनेपछि खुशी भएकी ती बृद्धाले अस्पतालको बेडमै चियो बियर मगाएर खाईन ।
उनको सेवामा खटिएका अस्पतालका स्टाफहरुले उनको इच्छा सुनेपछि आफैले चिसो बियर किनेर अस्पतालको बेडमा नै खाने ब्यवस्था मिलाएको बताइएको छ । ति बृद्धाले बियर पिएको तस्विर सामाजिक संजालमा भाइरल भइरहेको छ । यसो त विश्वमा सबै भन्दा धेरै कोरोना संक्रमित अमेरिकामा भेटिएका छन ।
दुनियाकै यो अनौठो जीव, जो लामो समय नहल्लिई ७ बर्षसम्म केही नखाई बाँच्छ
एजेन्सी । पानी पनि नखाई वर्षौसम्म कुन जीव बाँच्न सक्छ होला ? संसारमा यस्तो अनौठो
एजेन्सी । पानी पनि नखाई वर्षौसम्म कुन जीव बाँच्न सक्छ होला ? संसारमा यस्तो अनौठो स्पभाव भएका एकमद कम जीवहरु छन जसमध्ये ७ बर्षसम्म केही नखाई एकै ठाँउमा बसिरहने जीवको आज हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ ।
सेलामण्डर नाम गरेको यो अनौठो जीव दक्षिण पूर्व यूरोपको देश बोस्निया र हर्जेगोविनामा पाइने वैज्ञानिकहरुले पुष्टी गरेका छन् ।
लामोसमयसम्म नहल्लिकन बस्न सक्ने यो जीव पानी भित्रको गुफामा पाइने अनुसन्धानमा लागेका वैज्ञानिकहरुले रहस्य खोलेका छन् । छाला र अविकसित आखाँका कारण अन्धो हुने सेलामण्डरको आयू १ सय वर्ष हुने अनुसन्धानमा सक्रिय वैज्ञानिकले जनाएका छन् ।
दुनियाकै यि अनौठा मानिस, जसले रुखलाई घर ठानेर खाने र सुत्ने काम नै रुखमा गर्छन्
काठमाडौं, साउन ५ । के रुखमा बसेर खाने , बस्ने सुत्ने काम सम्भव छ ?
काठमाडौं, साउन ५ । के रुखमा बसेर खाने , बस्ने सुत्ने काम सम्भव छ ? भारतको उत्तर प्रदेशमा रुखमाथि बस्ने एक बाबाले यो कामलाई सम्भव पारिदिएका छन् । जसको नाम हो ‘बादर बाबा ’ हो ।
बाँदर बाबालाई हेर्ने मानिसको भिड लाग्ने गरेको छ । ६० वर्ष पार गरेका यी बाबामा नर बादरको जस्तो क्षमता रहेको भारतीय मिडियाले जनाएका छन् ।
जोगीको वस्त्रमा रहने एक साधुको भेषभुषा धारण गरी बस्ने बाँदर बाबाले आफुलाई हनुमानको परम भक्त भएको बताउदै हनुमानको भक्तका रुपमा चिनाउँदै आएका छन् ।
उनले रुखमा चढ्ने, रुखमै बस्ने, सुत्ने र रुखमै ध्यान गर्ने दृश्य हेर्न दैनिक कैयौँ मानिस उक्त स्थानमा पुग्ने गरेका छन् । बाँदर बाबालाई यो काम तत्कालै रोक्न प्रहरीले आग्रह गरेपनि बाबाले टरेका छैनन् ।
लकडाउनमा सरिताले प्रेट्रोल नदिएको भन्दै यि युवकले ३ वटा विषालु कोब्रा लगेर छाडिदिए
काठमाडौ, साउन ५ । पेट्रोल नपाएको झोकमा एक युवकले अनौठो तरिकाले बदला लिएका छन् ।
काठमाडौ, साउन ५ । पेट्रोल नपाएको झोकमा एक युवकले अनौठो तरिकाले बदला लिएका छन् । लकडाउनको समयमा निश्चित समयमा मात्रै दिने गरिएको पेट्रोल नपाएको झोकमा एक युवकले पम्पकी मालिक्नीको क्याबिनमा कोब्रा सर्प छोडिदिएपछि हंगामा नै मच्चिएको छ । घटना हो भारतको महाराष्ट्रको बुलढाणा शहरको हो ।
पेट्रोल लिन पम्पमा पुगेका युवकको लाख विन्ति नसुनी मालिक्नी सारिका चौधरीले पेट्रोल दिन अस्विकार गरिदिएपछि रिसको झोकमा ति युवकले दोस्रो पटक पम्पमा पुगेर तीनवटा क्याबिनमा एक–एक गरी सर्प छोडिदिएको भारतीय मिडियाले जनाएको छ ।
तर ति सर्पहरुले सरितालाई कुनै अप्ठ्यारो नपारी बाहिर निस्किए लगत्तै सरिताले सर्प समात्नका लागि सम्बन्धित व्यक्तिलाई सम्पर्क गरिन् । जुन घटनाको भिडियो भाइरल बनिरहेको छ ।
पत्याउनुहुन्छ ? जसको मुटुको तौल मात्रै १८१ किलो !
एजेन्सी । व्लु व्हेलको मुटुको तौल कति होला ? विश्वको सबैभन्दा ठुलो माछा मध्ये व्लु
एजेन्सी । व्लु व्हेलको मुटुको तौल कति होला ?
विश्वको सबैभन्दा ठुलो माछा मध्ये व्लु व्हेलको तौल १४ सय भएको र त्यसको मुटुको तौल मात्रै १८१ किलो भएको समाचारमा जनाइएको छ ।
संसारकै सबैभन्दा ठुलो प्राणी व्लु व्हेल समुन्द्रमा मात्रै पाइने प्राणी हो ।
जसको वजन सयौं टन हुने व्लु व्हेलको मुटुको वजन मात्र १८१ किलोग्रामको हुन्छ ।
९ महिनाको उमेरमा नै जिमनास्टिक थालेका यि बालकले २ वर्षमा नै गरे यस्तो कमाल, विश्वभर चर्चा
एजेन्सी । ईरानको बाबोल शहरका ६ वर्षका एक बालक अहिले सामाजिक संजालमा भाइरल बनेका छन्
एजेन्सी । ईरानको बाबोल शहरका ६ वर्षका एक बालक अहिले सामाजिक संजालमा भाइरल बनेका छन् । आरत होसैनी नाम गरेका बालक बहुप्रतिभाषाली छन् ।
९ महिनाको उमेरमा नै जिमनास्टिक थालेका आरतले दुई बर्षको उमेरसम्म आइपुग्दा नै अन्र्तराष्ट्रिय चर्चा कमाएपछि उनी लगातार भाइरल बनिरहेका छन् ।
सन् २०१३ सेटेक्बर ३० मा जन्मिएका उनले ६ बर्षकै उमेरमा सिक्स प्याक बनाएसँगै यी बालकको चर्चा विश्वभर छ । आरत होसैनीको इन्स्टाग्राममा उनको ४२ लाख भन्दा बढि फलोअर्स छन् ।
यति मात्र होइन उनको एक पोष्टमा लाखौ लाइक आउने गरेको ईरानका समाचार एजेन्सीहरुले जनाएका छन् । उनले लिभरपुल एकेडमीमा स्पोर्ट्स ट्रेनिग लिइरहेका छन् । आरतको चर्चा र उपलब्धिका पछाडी उनका बाबुको मुख्य हात रहेको छ ।
यी सुपरहिरो बालक जसले आफ्नै ज्यानको बाजी लगाएर बहिनीको ज्यान बचाए
०३ असार, काठमाडौंः अहिले सामाजिक सञ्जालमा एक बालकको तस्विरलाई लिएर निकै चर्चा भईरहेको छ ।
अहिले सामाजिक सञ्जालमा एक बालकको तस्विरलाई लिएर निकै चर्चा भईरहेको छ । आज हामी त्यहिँ तस्विरको पृष्ठभूमिको बारेका कुराकानी गर्छौ । त्यो तस्विरमा एक बालकले आफ्नी बहिनीलाई अंगालोमा बेरिरहेका छन् भने ती बालकको मुखमा टाका लगाइएको देखिन्छ ।
उक्त तस्विरमा भएका बालक ब्रिगर हुन्, जसले आफ्नी बहिनीलाई बचाएका छन् । उनकी आन्टीले उनको कथालाई सामाजिक सञ्जालमा हालेसँगै यो कथा निकै भाइरल भईरहेको छ । ब्रिगरले आफ्नी बहिनीलाई कुकुरले टोक्न खोज्दा बिचमा आएर बचाएका हुन् ।
अहिले ब्रिगरको अनुहारमा ९० वटा टाका लगाईएको छ । उनको अनुहारमा दाग निकै ठूलो र घाउ पनि गहिरो देखिन्छ । उनको आन्टीले सामाजिक सञ्जालमा हालेअनुसार, ‘कुकुरले बहिनीलाई टोक्नुभन्दा मलाई टोकेस भनेर मैले बिचमा आएर बहिनीलाई बचाएको’ भन्दै ब्रिगरले आफूले कुकुर र बहिनीको बिचमा आउनेको कथा बताएका छन् ।
अहिले निकै चर्चित भएका ब्रिगरलाई लिएर संसारभर नै निकै चर्चा भईरहेको छ । उनलाई विश्वप्रख्यात एभेन्जर्स सेरिजका अभिनेता तथा कलाकारले सुपर हिजोभन्दै म्यासेज तथा भिडियोहरु पठाईरहेका छन् ।
एजेन्सी । मानिसले एउटा घरका लागि आजिवन संघर्ष गर्नुपर्छ । नेपालमा कतिपय मानिसहरुले घर बनाउने
एजेन्सी । मानिसले एउटा घरका लागि आजिवन संघर्ष गर्नुपर्छ । नेपालमा कतिपय मानिसहरुले घर बनाउने सपना देख्दा देख्दै संसारबाट बिदा भएका कैयौँ उदाहरणहरु छन् । बढ्दो महंगीका कारण घर बनाउन हिजोआज धेरैका लागि असम्भव जस्तै बनेको छ । तर इटालीमा ८० रुपैयाँमा घर किन्न सकिन्छ । जुन कुरा सुन्दा झट्ट पत्यार लाग्दैन ।
इटलीको द्धिप सिसिलीमा भएको एक नगर परिषद विदेशीन लागेका मानिसहरुलाई रोकी संबुका गाउँमा बस्न सहयोग गरीरहेका कारण यहाँ एउटा घरको मुल्य १ युरो वा ८० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
संबुका गाउँमा घट्दै गएको जनसख्या र आवादीलाई मध्य नजर गर्दै यस्तो योजना ल्यााएर जनसंख्या बढाउने काम गरिएको हो । ५८ सय जनसख्या भएको उक्त स्थानमा पत्रकार, लेखक, संगीतकार, र राम्रा मानिसहरुले घर खरिद गरिरहेको बताइएको छ ।
दुनियाकै अनौठो सर्प, जो उड्छ, छन् यस्तो अनौठा किस्साहरु
एजेन्सी । तपाई हामीले गाउँ घरमा देखेका सर्पहरु सलल जमिनमा हिँड्छन् । तर दुनियामा यस्ता
एजेन्सी । तपाई हामीले गाउँ घरमा देखेका सर्पहरु सलल जमिनमा हिँड्छन् । तर दुनियामा यस्ता पनि सर्पहरु छन् जो सहजै उड्न सक्छन् । दक्षिण–पुर्वी एशियामा, दक्षिण चीन, भारत र श्रीलंकामा पाइने क्रिसोपिली जीजस नामक सर्प उड्ने सर्प मध्येको एक हो ।
यो एकदम छिटो चल्न सक्ने क्षमता नै यसको विशिष्टिता हो । जसको जमिनमा पाइने सर्पको तुलनामा विष निकै कम हुन्छ । यसले आफ्नो शरीर फुलाएर एक विशेष आकार दिएर अर्को ग्लाइडमा जम्प गर्छ । खासमा उक्त सर्प छिटो हिँड्ने भएका कारण उडेको जस्तो देखिने गरेको सर्पविज्ञ बताउँछन् ।
टाउको कालो, पहेलो वा हल्का हरियो र केही दागहरुसहित कालो हुने यो अनौठो सर्पले छेपारो, साना स्तनपायी, चरा, साना सर्प र किराहरु नै आएर आफ्ना आहरा चलाउने गर्छ ।
प्रवास बाटै पिडित नेपालीको पिडामा सहयोगी बनेकी ईशा गुरुङ ।
भोला लामीछाने, विकसित मुलुक बेलायतमा बसोबास गर्दै यहा सम्म आऊदाका आफ्नो दुःख भोगाइ लाई पर
भोला लामीछाने, विकसित मुलुक बेलायतमा बसोबास गर्दै यहा सम्म आऊदाका आफ्नो दुःख भोगाइ लाई पर सारेर नेपाल र नेपालीको सुखदुःखमा चौबीसै घण्टा सम्म सोच्न भ्याउने साच्चिकै नेपालकी बहादुर छोरी हुन् ईशा गुरुङ ।
के‌ हिमाल के पहाड के तराई उनको समाज सेवाको प्रशंसा वर्णन जती गरे पनी कम नै हुन जान्छ चौबीस घण्टा भित्र नै दैबी तथा प्राकृतिक प्रकोप मा पिल्सिएका नेपालीको पिडामा मल्हम लगाउन कती कठिन हुन्छ हामी सबैले अनुमान लगाउन सक्छौ।मुलुकमा भुकम्प,आगलागी , बाढी पहिरो , आकस्मिक दुघर्टनाका घटना किन नहुन आफ्नो बल बुताले भ्याएसम्म सकेको सहयोग गर्दै आईरहेकी छन् ईशाले । यती मात्रै होईन हरेक समयमा अभियान सञ्चालन गरेर थुप्रै रोगी बिरामी अशक्त हरुको नयाँ जिवन पनि दिलाएकी छन् ऊनले । धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशन ,रबी लामिछाने न्युज २४का अभियान किन नहुन ईशाका सहयोगी हातहरु पुगेकै छन् । यतिमात्र होइन देशको सिमाना मिच्दा आफ्नो देश को खातीर बुलन्द आवाज निकाल्ने ईशा, दुई चार शब्द लेख्दैमा उनका समाजसेवाका कार्यहरू यहा नअट्ने हुन सक्दछन् ,आजका मितिसम्म करिब ६ करोड रुपैयाँको ‌सहयोग गरेको उनले बताए पनि समाजसेवाको कुनै मुल्य हुदैन ,आज २०७७ असार २८ गते मणिपाल अस्पतालमा उपचाररत पिडामा रहेका उनिहरुलाइ अस्पतलामै गएर रकम हस्तान्तरण गर्न भ्याईन् यो घटनाको कुनै मुल्य हुन सक्छ,यो अमुल्य छ।
मुलुकबासीहरु जब जोखिममा परेर हताहत हुन्छन त्यो अबस्थामा आफू टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दिन भनी बताउने गुरुङले अस्ति मात्र पर्वत, बझाङ र सिन्धुपाल्चोकका बाढी पहिरो पीडितलाइ आर्थिक सहयोग पुर्याउने काम सम्पन्न गरिन ।
बिभिन्न अभियान सञ्चालन गर्दै गर्दा कतीले अमुक बनेर सामाजिक संजालमा भ्रम सृजना गरी चरित्र हत्या गर्ने समुदाय पनी हाम्रो समाजमा रहेको बेलाबेलामा उनले बताउदै आएकी छन् । यसरी निश्कर्षमा पुग्न लागेको कामलाई हतोष्साहीत गर्दै असली कामलाई पर्दा पछाडि पार्ने अर्काको ईज्जतमा दाग लगाउन तल्लिन कु‌ मानव हरूका कारण आफूले अभियान सञ्चालन गर्न बन्द गरेको तितो अनुभवहरु सेयर गरेकी गुरुङलाई समाजले उच्च मनोबल दिन नसके इशा गुरुङहरू हराऊनेछन् , गरिबका आँशु पुछिदिने र तिनका घरहरू ठड्याउने हजारौ ईशाहरुको समाज लाई खाचो छ ।
दुनियाकै महंगो सम्बन्धविच्छेद, सम्बन्धविच्छेद गरेबापत ७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बुझाइयो
काठमाडौँ । विश्वकै महंगो डिर्भोसमा कति खर्च भयो होला ? तपाई हाम्रो अनुमान भन्दा माथिको
काठमाडौँ । विश्वकै महंगो डिर्भोसमा कति खर्च भयो होला ? तपाई हाम्रो अनुमान भन्दा माथिको रकम खर्च गर्दै साउदी अरबका बिजनेस टाइकुन शेख वालिद जुफैली र अमेरिकी मोडल क्रिस्टिना एस्ट्राडाको सम्बन्धविच्छेद गरेका हुन् । घटना हो सन् २०१४ को ।
अन्तराष्ट्रिय मिडियाका अनुसार वालिदले क्रिस्टिनालाई सम्बन्धविच्छेद गरेबापत ७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बुझाएका हुन् । वालिदले क्रिस्टिनासँग सम्बन्धविच्छेद नगर्दै अर्की महिलासँग विवाह गरेको रहस्य पनि बाहिर आएको छ ।
त्यस्तै रुसी अर्बपति दिमित्री रिबोलोभलेभ र इलेना रिबोलोभलेभ पनि सन् २०१४ मै छुट्टिए । सम्बन्धविच्छेदका वेला दिमित्रीले इलेनालाई बुझाएको रकम सुन्दा नै अचम्म लाग्छ । उनले ४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बुझाएका थिए ।
यी सासुले ज्वाइँका लागि बनाइन ६७ परिकारका खाने कुरा, पत्याउनु हुन्छ?
२८ असार, काठमाडौंः घरमा पाहुना आउँदा खानेकुराका कति किसिम बनाइएला? ५ वा ६ भन्दा धेरै परिकार
२८ असार, काठमाडौंः घरमा पाहुना आउँदा खानेकुराका कति किसिम बनाइएला? ५ वा ६ भन्दा धेरै परिकार प्रायः हामी बनाउँदैनौं ।
तर, भारतमा एक जना सासुले आफ्नो ज्वाइँको लागि झण्डै ६७ पकवान तयार गरेकी छिन ।
उक्त सासुले नेपालको छिमेकी मुलुक भारतको आन्ध्रप्रदेशमा आफ्नो ज्वाइँका लागि ६७ थरीका परिकार तयार पारेकी हुन । आन्ध्र प्रदेशमा मनाइने ज्वाइँ षष्टी नामक विशेष पर्वमा उनले आफ्ना ज्वाइँलाई ६७ व्यञ्जयनको खाना खुवाएकी हुन् ।
ज्योतिष विज्ञानमा हामी जो कोही धेरै विश्वास विश्वास गर्छौ । हुन पनि हो, ज्योतिष विज्ञान
ज्योतिष विज्ञानमा हामी जो कोही धेरै विश्वास विश्वास गर्छौ । हुन पनि हो, ज्योतिष विज्ञान भनेको हाम्रो मानव जीवनमा जोडिएको एक शास्त्र हो । ज्योतिष शास्त्रले भनेका र भविष्यवाणी गरेका कतिपयकुराहरू मिलिरहेका छन् ।
यस्तै मध्य एक राशि अनुसारको व्यवहारको पनि निकै चर्चा हुने गर्दछ । मानिसका फरक फरक राशि अनुसार उसको व्यवहार फरक हुने गर्दछ ।
विवाहको सम्बन्धमा पनि राशि अनुसार नै वैवाहिक सम्बन्ध र परिवारको निर्धारण रहने गर्दछ । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार यी तल दिएका राशि हुने युवतीहरू धेरै राम्रा र सफल बुहारी बन्न सक्छन् ।
सुनै सुनले बनेको दुनियाकै एकमात्र अनौठो ५ तारे होटलबारे जान्नुहोस् यि अपत्यारिला तथ्य
एजेन्सी । विश्वभर सुनको मूल्य ह्वात्तै आकाशिएका बेला सुनले बनेको विश्वकै पहिलो पाँचतारे होटल चर्चामा
बाबुले झुक्किएर २८ वटा कार किनेको रहस्य छोराले यसरी खोले
एजेन्सी – हरेक मानिसमा जीवनमा एक पटक आफ्नै कार चढ्ने इच्छा हुन्छ । तर एउटा
एजेन्सी – हरेक मानिसमा जीवनमा एक पटक आफ्नै कार चढ्ने इच्छा हुन्छ । तर एउटा कार किन्न खोज्दा एकै पटक २८ वटा कार किनेको तपाईले कहिल्यै देख्नु वा सुन्नु भउको छ ? अपत्यारिलो यो घटना हो जर्मनीको ।
अनलाइनबाट एक मानिसले १४ लाख युरोका २८ वटा टेस्ला कार एकैचोटी अर्डर गरेपछि उनी नराम्रोसँग झस्किएका छन् ।
यो अनौठो घटनाको बारेमा उनै व्यक्तिका छोराले रेडिटमा पहिलोपटक खुलासा गरेपछि यो अनौठो घटना बाहिर आएको हो ।
टेस्ला कम्पनीको वेबसाइटमा आएको गडबडीका कारण एउटा कार अर्डर गर्दा २८ वटा अर्डर भएको समाचारमा जनाइएको छ ।